Dubai Real Estate Seller Guide - Dubai Real Estate avy amin'ny Provident
Ampiasao ny Torolalan'ny Mpamatsy anao mba hanomezanao ny fahalalana momba ireo dingana tokony horaisina, mba hahazoana antoka fa ny varotrao dia mavitrika amin'ny fomba mahomby ary amin'ny farany dia amidy amin'ny olona marina amin'ny vidiny tsara.
Mba hizarana amim-pahombiazana ny lisitr'ireo trano hivarotana antsika dia mila izany isika
ny fifanekena momba ny fahazoan-dàlana momba ny Fahasalamana fantatra amin'ny anarana hoe Form A,
kopia amin'ny pasipaoronao
ary ny antontan-taratasy momba ny tompony arahin'asa:
Raha toa ny fanorenana an-trano:
Ny pejy 1st amin'ny Fifanarahana momba ny varotra anao
Ireo vola azonao tamin'ny vola nomenao ny Developer
Ny drafitr'ilay trano
Ny fanalahidin'ilay trano
Raha vita ny fananana:
Ny valin'ny lohateny na ny pejy 1st amin'ny Fifanarahana momba ny varotra
Fandefasana pasipaorin'ny tompony
Ny mari-panafarana famaranana ho an'ny fandoavam-bola
Ny fananana rehetra voavolavola dia takiana amin'ny fisoratana anarana miaraka amin'ny Departemanta Lands alohan'ny handefasana fahombiazana amin'ny fametrahana ny tompona vaovao. Ity sanda ity dia ho voampanga amin'ny mpivarotra
Famaritana momba ny fanananao
Raha vao nanao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena (Forma A) ianao dia handamina ny fotoana handaminana ny fanananareo. Havoaka amin'ny fanadihadiana momba ny tsenan'ny toeram-pitrandrahana mitovy amin'izany ianao ao amin'ny faritra misy anao, ary koa ireo fananana izay namidy vao haingana mba hanomezanao ny vidiny azonao andrasana.
Hividy ny fanananao
Raha vantany vao nanapa-kevitra ny hivarotra ny Dubai ianao, ny dingana manaraka dia ny hikaroka fanadihadiana ara-barotra avy amin'ny paik'adim-pivarotana ara-barotra ataon'ilay agent. Ity fampahalalana ity dia hanampy amin'ny famaritana ny vidin'ny vidiny sy ny fomba fivarotana amin'ny fikarakarana fikarohana amin'ny fanamarinana ny vidin'ny vidin-javatra efa misy ary ny traikefa ananany eo amin'ny tsena eo an-toerana dia hanome toro-hevitra momba ny toerana misy ny fanananao ao an-tsena.
Fepetra hividy ny fanananao
Raha vantany vao nanaiky tolotra avy amin'ny mpividy iray ianao, dia mila soniavina ny fifanarahana iray momba anao sy ny mpividy ny fifanarahana fantatra amin'ny hoe "Memorandum of Understanding (MOU)" na "Fifanarahana momba ny varotra" (SPA). Ity fifanarahana ity dia manasongadina ireo fepetra sy fepetra takiana, ary ny mpividy dia handoa onitra hatramin'ny 10% ny sandan'ny vidim-pifanarahana izay horaisin'ny Provident Estate amin'ny fitokisana mandra-pifindran'ilay daty.
Raha vantany vao nosoniavin'ny MOU / SPA ny fivarotana ny taninao, ny orinasa (ary indraindray ny dindon-koditra) fantatra any Dubai amin'ny maha "Transfè" azy dia mila fehezina mba handefasana ny fananana amin'ny anaranao amin'ny anaran'ny tompony vaovao . Ity dingana ity dia hokarakarain'ny toeram-ponenana ao amin'ny Provident, izay manolotra mpiara-miombon'antoka mivelatra, manome tolotra feno, matihanina sy mangarahara. Ny ekipan'ny Fivondronana dia mifanakalo amin'ireo mpandraharaha, mpampindram-bola ary orinasa governemanta isan'andro, ary mahazo ny fepetra rehetra, ny fepetra, ny politika ary ny fomba rehetra ilaina, ka manafaka anao amin'ny ilàna ny ho lasa mpizara fananana. Izy ireo dia hiatrika ny zava-drehetra amin'ny anaranao ary tokony tsy ho afaka hanatrika ny famindrana ianao, afaka mandamina ny famindrana ny famindrana ho anao noho ny fahefan'ny Fampanoavana.
2% - 3% ho an'ny fivarotana ny fananana amin'ny vidin'ny brokerage